बचत भनेको के हो ? - प्रश्नोत्तर - प्रकाशितः पुस ६, २०७३ - नारी
बचत भनेको के हो ?
पुस ६, २०७३
अञ्जु पन्त, अप्रेसन म्यानेजर बिओके लुम्बिनी बैंक
आफ्नो आयबाट खर्च घटाएर बचेको रकमलाई बचत भनिन्छ । अहिले बैंकले विभिन्न विकल्पमा बचतका अप्सन ल्याएका छन् । आफूलाई सजिलो हुने बचत खाता खोली बचत गर्न सकिन्छ । बचत गर्ने बानी विशेषगरी महिलाहरूमा हुन्छ । घरमा भन्दा बैंकमा बचत गर्नाले व्याज पाइनुका साथै बचत सुरक्षित हुन्छ ।
बचत खाता कति प्रकारका हुन्छन् ?
बचत खाता ३ प्रकारका हुन्छन् तर पनि बैंकहरूले आफ्नो हिसाबले विविध नाम दिएर बचत खाता संचालन गरेका छन् । चल्ती, बचत तथा मुद्दती खाता सबै बंैकमा हुन्छन् । त्यसबाहेक गृहिणी बचत, बाल बचत, शेयर बचत विविध नामका बचत खाता अहिले बैंकहरूले संचालनमा ल्याएका छन् ।
बचत खातामध्ये कुन बचत खाता महिलाहरूलाई उपयोगी हुन्छ ?
महिलाहरूले बचत गर्न सुरु गरेपछि सकेसम्म अत्याश्यक नपरी बैंकबाट पैसा निकाल्दैनन् । त्यस हिसाबले बचत खाता उपयोगी छ । यसमा पैसा राखेबापत उनीहरूले व्याज पनि पाउँछन् । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो खर्च टार्न सक्छन् । आफूसँग भएको बचतबाट व्याज आर्जन गर्नेहरूलाई यो खाता निकै उपयोगी छ ।
बचत खाताका बेफाइदा के–के छन् ?
यसका खासै बेफाइदा छैनन् । आफूसँग भएको पुँजीलाई सुरक्षित राखी बंैकको नियमअनुसार निकाल्न सकिन्छ । मुद्दती, ट्रेजरी बिल तथा सीडीएफभन्दा कम व्याज प्राप्त हुनु यसको बेफाइदा हो ।
मुद्दती खाता कति उपयोगी छ ?
आफूसँग भएको बढी पँुजीलाई घरमा राख्न सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यसलाई ५ वर्ष तथा १० वर्षका लागि मुद्दती खातामा राख्न सकिन्छ । यसमा व्याजदर पनि बढी हुन्छ । बैंकको नियमअनुसार ३ महिनामा १ पटक व्याज निकाल्न सकिन्छ । कुनै बखत पैसा चाहिएको अवस्थामा आफ्नो बचतको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिन्छ ।
जेष्ठ २४, २०७३ - इन्धन बचत गर्ने केही उपाय
जेष्ठ १३, २०७३ - समयको बचत गर्ने उपाय
वैशाख २२, २०७३ - अफिसमा समय बचत
फाल्गुन ११, २०७२ - घरमा समयको बचत
फाल्गुन १०, २०७२ - अफिसमा समय बचत
पुस ३०, २०७२ - सुरक्षित भविष्यका लागि बचत
थप केही प्रश्नोत्तरबाट
इतिशा गिरी, लेखक जेष्ठ १२, २०७९
स्वस्थ रहन योग र खाना फाल्गुन १२, २०७८
भिगेनको उपकरणबाट थेरापी फाल्गुन ११, २०७८
गर्मीमा तरोताजा र शीतलता फाल्गुन ८, २०७८
पर्दा पछाडिका खेलाडी माघ २४, २०७८
संस्थाको सफलतामा नेतृत्वकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण माघ ५, २०७८